Pete Doherty, oo loo haystay haysashada maandooriyaha, ayaa la siidaayay - TELES RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE Pete Doherty, oo loo haystay haysashada maandooriyaha ayaa la siidaayay
Pete Doherty, oo loo haystay haysashada maandooriyaha ayaa la siidaayay
Pete Doherty ayaa xabsiga ka maqan. Fannaanadda jahwareersan ee Ingiriisiga ah ee 40 sano ayaa booliisku xireen Paris, degmada Pigalle, habeenkii Khamiista 7 Friday 8 November, haysashada maandooriyaha. Sida laga soo xigtay ilo garsoor oo soo xigtay Point ah, dhagaxa weyn, hogaamiyaha Babyshambles oo hada safar ku jooga kooxdiisa 'Libertines', ayaa markaa ku sugnaa macaamil ganacsi oo buuxa ee maandooriyaha geeska rue de Douai iyo rue Fontaine, oo ah meel caan ku ah nolosha habeenkii ee Paris. Intii lagu jiray qabashadiisa, Pete Doherty, oo sakhraansanaa oo sarkhaansanaa daroogada, wuxuu ku dhibtooday xukun la'aan, kahor adeecidda iyo gelitaanka garsoorka.
Waxaan ka baranay subaxnimadii Sabtida taasxabsi ku haynta dhagaxa ayaa loo qoondeeyay in laga baxsado waxaa lagu kordhiyay saacadaha 24, waa in la maqlaa maalinta. Point ah Caawa in heesta, oo ku noolaa xiriir jacayl Kate Moss, ayaa la siidaayay. "Waa mawduuca amar ciqaabeed oo loo adeegsado maandooriyaha, iyada oo loo baahan yahay maalmo 100 - oo ganaax u ah 50 euro, sida ku xusan dabaqa barxadda ee Paris", Ayuu yiri saxafiga Aziz Zemouri ee the Point ee tweet.
#PeteDoherty la sii daayay waa mowduuca amar dambiyeed ee isticmaalka maandooriyaha, iyadoo loo baahan yahay maalmo 100-ganaax ah oo loo rogay 50 euro sida ku xusan barasaabka Paris @LePoint Pete Doherty
- aziz zemouri (@azizzemouri1) November 9, 2019
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.closermag.fr/people/pete-doherty-en-garde-a-vue-pour-possession-de-cocaine-a-ete-remis-en-liberte-1046984
Zara Tindall naxdin: Zara muujinta layaabka leh ee ku saabsan hooyonimada - "Aad uma ihi hooyada"
Sophie Wessex: Waa maxay sababta ay Countess u taabaneyso muusigani xusuusinta